တပ်မတော်အပေါ် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင်၊ ထိခိုက်နစ်နာအောင်၊ ပြည်သူလူထုနှင့် နိုင်ငံတကာက အထင်အ?? - Yangon Media Group
တပ်မတော်အနေနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက် နေသည့်အချိန်မှာ တပ်မတော်အပေါ် ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင်၊ ထိခိုက်နစ်နာအောင်ဆောင်ရွက်သည့်၊ ပြည်သူလူထု အထင်အမြင်မှားအောင်၊ နိုင်ငံတကာက အထင်အမြင်မှား အောင်ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စတွေ ကို ဘယ်လိုမှလက်မခံဟု တပ် မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်း ထွန်းညီက ပြောကြားခဲ့သည်။ မေ ၃ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ စစ်သမိုင်းပြတိုက် တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တပ်မတော်၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနှင့် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ၏ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တပ်မ တော်ဆိုတာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိတ် အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်သား တွေဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့အစိတ် အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့တပ် မတော်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အစိတ် အပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး တော့ နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်နေ တဲ့အချိန်မှာ တပ်မတော်အပေါ်ဂုဏ် သိက္ခာကျဆင်းအောင်၊ ထိခိုက်နစ် နာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ ပြည်သူ လူထုအထင်အမြင်မှားအောင်၊ နိုင်ငံ တကာက အထင်အမြင်မှားအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကို ဘယ်လို မှလက်မခံဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း နိုင်ငံသားပါ။ အဲဒီတော့ ဥပဒေအရ နစ်နာတယ်ဆိုရင် မည်သူမဆိုနီးစပ် ရာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက် တဲ့ဌာနတွေဖြစ်တဲ့ရဲစခန်း ဘယ်သူ မဆိုတိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့တပ်မတော်သားတင် မဟုတ် ဘူး။ နစ်နာတယ်လို့ယူဆတဲ့သူမှန် သမျှ ရဲက ရဲအရေးပိုင်တယ်ဆိုရင် ရဲကအရေးယူမယ်။
ရဲအရေးမပိုင်ရင် တရားသူကြီးဆီမှာ လျှောက်ထား မယ်။ တရားသူကြီးကလည်းလျှောက် ထားလာတဲ့လျှောက်ထားမှုတွေ၊ ရဲ ကလည်း ရဲအပေါ်မှာလျှောက်ထား လာတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နစ်နာ တယ်လို့ယူဆတဲ့ဘက်ကနေပြီး ဥပ ဒေအရဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ ဥပဒေနဲ့ကိုက် ညီတယ်ဆိုမှ လက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေမှာ တပ်မတော်ကနေ တစ်ဖက်သတ် ဖိအားပေးပြီးတော့ မှ တစ်ဖက်သတ်ဥပဒေနဲ့ လုပ်နေ တာမဟုတ်ပါဘူး။ တရားသူကြီးက လည်း သူလက်မခံနိုင်ရင် စဉ်းစား မှာပါ။ သူလက်ခံဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ် လို့ယူဆလို့သာ အမှုဖွင့်ခြင်း၊ လက် ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဒီဟာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစီရင်ရေးအပိုင်း မှာလည်း တပ်မတော်ကနေဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ တရားစီ ရင်ဖို့အတွက် သူ့ရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ တရားသူ ကြီးက သူ့ရဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အမှု စီရင်တဲ့အပိုင်းကို ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့် မယ်။
အဲဒီအတွက်ကို ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တော့ မီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်း ကျွန် တော်တို့ တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်လာ လို့ရှိရင် မဟုတ်မမှန် ဖော်ပြတာတွေ၊ တပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်း စေမယ့်လုပ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ ဒီလို တရားစွဲဆိုမှု ဆောင်ရွက်တယ်ဆို တာ တရားလက်လွတ်လုပ်တာမဟုတ် ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုကိုလည်းစောင့် ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ တပ်မတော်က ပြည်သူလူထုကို ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အား လုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ပြောပါတယ်”ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် တပ်မတော်သတင်း မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းမှလည်း ”အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ ကျောက် တန်းကျေးရွာ ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါ။ ကျောက်တန်းကျေးရွာမှာ ၂၇၅ ယောက်စစ်ဆေးနေတာ ရှိတယ်။ ဒီနေ့နံနက်မှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိ ဘူးဆိုတဲ့ သံသယကင်းတဲ့ ၁၂၆ ယောက်ကို ပြန်ပြီးလွှတ်ပြီးဖြစ်ပါ တယ်။ ပြီးရင် သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ နံနက်၂နာရီဖြစ်စဉ်မှာ သေ ဆုံးခဲ့ရသူတွေက ခြောက်ဦးရဲ့အ လောင်းကို ဒီနေ့နံနက် ၉နာရီတိတိ မှာမိသားစုများလက်ထဲကို သူတို့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းများကို တပ်ကနေကိုယ် တိုင်အပ်နှံပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သွားပြီး အပ်နှံခဲ့တဲ့အပြင် သက်ဆိုင်ရာသံဃာ တော်တွေပင့်ဖိတ်ပြီး သရဏဂုံတင် ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၂ နာရီအထိ အလောင်းတွေမြေကျတဲ့ အထိ တပ်ကအစစအရာရာပံ့ပိုးပြီး ရပ်မိရပ်ဖများရှေ့မှာ ပွင့်လင်းမြင် သာစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းကျန်တဲ့သူတွေ ဘယ် လိုလုပ်မလဲ၊ ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ် သက်လို့ ပဏာမစစ်ကြောချက်အရ (AA )တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါပါတယ်။ AA နဲ့ပတ်သက်သူတွေပါပါတယ်။ သုံး မျိုးသုံးစားရှိပါတယ်။ AA တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေ၊ AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအ တိုင်း ရဲမှာအမှုဖွင့်ပါမယ်။ တရား ရုံးမှာ စွဲတင်လို့ရတဲ့အမှုများ တရား ရုံးမှာစွဲတင်ပါမယ်။ သံသယကင်းတယ် မပတ်သက်ဘူး ထပ်မံထွက် ပေါ်လာတဲ့သူတွေကတော့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း လွှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မည့်လုပ်သားများ အသက်အာမခံစနစ်သစ်ကို မြန်မာ့အာမ
(၁၁)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ၌ ဆုမဲပေါင်း တစ်သိန်းနှစ်သောင်းကျော် ဖွင့်လှစ်ပေ??